Kufuneka wenze ntoni ukuba iWindows ayizukuqala | Iindaba zeGajethi
Kufuneka wenze ntoni ukuba iWindows ayizukuqala
Xa izixhobo zethu ziyekile ukusebenza ngaphandle kwesizathu, kuxhomekeka kwindlela esizisebenzisa ngayo izixhobo zethu, umhlaba kungenzeka ukuba uwe phezu kwethu, ngakumbi ukuba eyona nto siyisebenzisayo kukufunda okanye ukusebenza. Izizathu zokuba izixhobo zethu zingayeka ukusebenza zahlukile kwaye ayizizo zonke ezinokulungiswa ngokukhawuleza.
Kodwa ngaphambi kokufikelela kweli nqanaba libalulekileyo, elinokusishiya iiyure okanye iintsuku ngaphandle kokusebenza, kufanelekile ukuba senze a ukhuphelo lweqela lethuNokuba lilifu likaMicrosoft, kuGoogle Drayivu okanye naliphi na iqonga, ukuze uqhubeke nokusebenza kwesinye isixhobo, ukuba iqela lethu kufuneka lityelele inkonzo yobuchwephesha.
Izizathu zokuba izixhobo zethu zingayeka ukusebenza Ziyahluka, Ukusuka kwiingxaki zecandelo elithile lekhompyutha kwizixhobo zethu, ukuya kuhlaziyo lwenkqubo yokugqibela okanye isicelo esincinci esisifakileyo esonakalise izixhobo zethu.
1 I-PC iqala ngokuzenzekelayo okanye ivale emva kwemizuzu embalwa
2 Ikhompyuter ixhomeke kaninzi emva kokuqala
3 Susa ii-disc zediski, iidrive drive, kunye neememori khadi
4 Lungisa iidrive boot
5 Ukunikezelwa kwamandla
6 Iqela lishaya impempe amatyeli aliqela
7 Iingxaki zesoftware
I-PC iqala ngokuzenzekelayo okanye ivale emva kwemizuzu embalwa
Zombini iiprosesa kunye neebhodi ezikhoyo, zidibanisa inkqubo yokhuseleko enoxanduva lokucima okanye ukuqala kwakhona ikhompyuter ngokuzenzekelayo xa ibona ubushushu bezixhobo zethu buyenyuka ngokukhawuleza kwaye isilele ukubusasaza ubushushu obuveliswayo.
Isizathu sale ngxaki kukuncamathisela okushushu okubekwe kwiprosesa, uncamathiselo olushushu olunoxanduva lokusasaza, ngokudibeneyo nabalandeli, ubushushu obuveliswa yinkqubo yethu yekhompyuter. Kwezi meko, ukuba asizizo izandla, kukuya kwinkonzo yezobuchwephesha, ukuze badibanise iprosesa kwaye bathathe indawo yokuncamathisela okuthe tye.
Ikhompyuter ixhomeke kaninzi emva kokuqala
Ingxaki, enxulumene neyangaphambili, safumanisa ukuba izixhobo ziqala ngaphandle kwengxaki, kodwa kutshintsho lokuqala, izixhobo ziyaqina kwaye ziyeke ukusebenza. Ingxaki ehlala ibangela oku kuphazamiseka, siyifumana kwimemori ye-RAM. Ewe Imodyuli yememori ye-RAM ayisebenzi kakuhle, Yonke into exhomekeke kuyo iyayeka ukuyenza.
Isisombululo kule ngxaki siyi buyisela imemori ebonakalayo kwikhompyuter yakho. Musa ukudida inkumbulo ebonakalayo kunye nendawo yokugcina (i-hard disk). Imemori ye-RAM ayigcini idatha, kodwa iqinisekisa ukuba ikhompyuter ilayisha usetyenziso oluyimfuneko ukuze lusebenzise. Ihard drive igcina usetyenziso kunye nedatha yezixhobo zethu.
Susa ii-disc zediski, iidrive drive, kunye neememori khadi
Kwiminyaka yakutshanje, sibonile ukuba uninzi lweekhompyuter, ngakumbi ii-laptops, ziye zashiya abadlali beDVD / Blu-ray, yiyo kuphela indlela yokubuyisela inkqubo yokusebenza kukusebenzisa Izibuko le-USB okanye umfundi wekhadi.
Ukuba ikhompyuter yethu iyekile ukuqala, ngaphandle kwesizathu, into yokuqala ekufuneka siyenzile yile unqamle nayiphi na idrayivu ye-USB, imemori khadi okanye idiski ebonakalayo (ukuba isixhobo sinayo) ukuze i-BIOS, xa ingakhangeli nayiphi na enye iyunithi, iqhubeke ukuqala ukufunda idiski enzima.
Nangona inkqubo ibhaqa ngokuzenzekelayo ukuba inkqubo yokusebenza ifunyenwe kwenye yezi drive ukuqhuba ukuqala ikhompyuter, kwaye ukuba akunjalo, iya kukhetho olulandelayo olusetiweyo, kusenokwenzeka ukuba idrive esetyenzisiweyo inenye ukuqala iifayile ezithintela ikhompyuter ekuthatheni inyathelo elilandelayo.
Lungisa iidrive boot
Ukuba asinayo idrive yangaphandle okanye idiski yokubonisa exhunywe kwikhompyuter, kufuneka singene kwi-BIOS ukujonga uthini umyalelo weqela lethu. Uninzi lweekhompyuter zivela kumzi-mveliso eseka i-hard disk njengendlela yokuqala yokuqalisa ikhompyuter. Ukuba sifuna ukufaka ingxelo entsha ye-OS, kufuneka siguqule iiyunithi zokuqala ukuze eyokuqala ibe lizibuko okanye iyunithi apho ifakwe khona.
Ukuba sinezibuko le-USB eliqwalaselweyo, esingenayo nayiphi na idrayivu edityanisiweyo, inkqubo ezenzekelayo eyenziwa yi-BIOS kukutsiba kwindawo elandelayo: idiski enzima. Kodwa ukuba i-USB ayisebenzi kakuhle, Iqela alinakuyibona kwaye licinga ngonaphakade.
Siza kuyibona ngokukhawuleza le ngxaki, kuba ukuba ucofa iqhosha ukuvula izixhobo zethu, oku ayinampembelelo kwikhompyuter, okusilelayo kukunikezelwa kwamandla (ucinga ukuba intambo eya ngoku kunye neplagi ixhunyiwe ngokufanelekileyo). Ukuba singumntu ophetheyo kwaye yikhompyuter yedesktop, sinokuthenga umbane omtsha, onamandla afanayo, kwaye sikubeke ngokulula.
Ukuba ilaptop kwaye izixhobo aziqali ngebhetri, kufuneka siyidibanise nekhoyo ngoku ukujonga ukuba ibhetri efanayo iphelile okanye iyekile ukusebenza ngokupheleleyo. Ukuba iyavula ngaphandle kweengxaki xa siqhagamshela itshaja, sele siyazi loo nto ibhetri idlulile ebomini obungcono. IAmazon lukhetho olukhulu lokujonga iibhetri zelaptop.
Iqela lishaya impempe amatyeli aliqela
Ukuba izixhobo zethu kwimizuzwana yokucofa iqhosha lokuqala, isizathu kungenxa ibhodi apho onke amacandelo ayinxalenye yezixhobo aqhagamshelwe, uyekile ukusebenza. Ukuba yikhompyuter yedesktop, sinokuyithenga eneempawu ezifanayo kwaye siyibuyisele ngaphandle kweengxaki.
Kodwa ukuba ilaptop, intetho ethi "ikhola ibiza ngaphezulu kwenja" isebenza ngokukuko kule ngxaki, ke ngoku ulibale malunga nelaptop ngonaphakade. Into yokuba ibhodi iyekile ukusebenza ayithethi ukuba idatha yethu ilahlekile, kuba zizinto ezahlukileyo ngokupheleleyo, kwaye singavula izixhobo ukuze sisuse i-hard drive kwaye siyidibanise nesinye isixhobo ukufikelela kwidatha yayo.
Nangona ihlala inqabile imeko, kunokwenzeka ukuba usetyenziso oluthile esilufakileyo, kunyeNdibangela ukungavisisani kwiqela, ikakhulu kwirejista, kwaye akukho ndlela yokuyiqala ngokufanelekileyo. Esona sisombululo, ngaphandle kokufomatha kwaye siphulukane nalo lonke ulwazi olugciniweyo (ukuba asinayo ikopi yogcino) kukuqala kwiMeko eKhuselekileyo.
Indlela ekhuselekileyo iqala ikhompyuter ngokusetyenziswa okungqongqo okuyimfuneko ukuba iqale ngokuchanekileyo. Ngale ndlela, ukuba siyazi ukuba yeyiphi na into enokuthi ichaphazele ikhompyuter yethu, singayisusa ukuze iphinde isebenze.
Ukuba akunjalo, kule menyu, sinokubuyisela inkqubo, sibuyisele umfanekiso wenkqubo okanye ukulungisa ukulungisa, le ibeyindlela yokuqala ekufuneka siyithathele ingqalelo ukusombulula isizathu sokuba iqela lethu liyeke ukuqala njengoko lenzile.
Zonke iingxaki ezichazwe kweli nqaku azihambelani Windows 10, kuba uninzi lwazo, ukuba ayizizo zonke, zichaphazela izixhobo zekhompyutha okanye inkqubo yokusebenza yebhodi yomama (BIOS), ke ngoko Zisebenza kuyo nayiphi na ikhompyuter elawulwa yiWindowsngaphandle kwenguqulelo yeWindows oziqhubayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Kufuneka wenze ntoni ukuba iWindows ayizukuqala
IMovistar iya kubandakanya iDisney + kwiiphakheji zayo zeFusion
Yintoni entsha kwi-Android 11 yonjiniyela weBeta kunye nendlela yokufaka